Shiinaha BASBAASKA MEDALS warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Billadheena Baseball-ka waxaa hubaal ah inay guri ku ahaanayaan ciyaartoydiina! Xadhig silsilado BILAASH ah iyo xamuul badan oo xulashooyin ah. Waan garaacnay tartamayaashayada, waxaadna leedahay kalsooni dheeraad ah oo aad kula macaamilayso soo saare abaalmarin sumcad leh kumanaan macaamiil ah oo qanacsan! Dukaan xulkeena weyn ee Biladaha Baseball ee hoose, oo u fiirso dhimisyada tiradaada kubbadda baseball adoo dooranaya billad hoose! Waxaan isku daynay intii ugu wanaagsaneyd inaan soo bandhigno xul wanaagsan oo ah bilado baseball oo tayo leh oo ay weheliso xulashooyinka billadaha baseball qaarkood. Waxaan rajeynayaa inaad ku raacsan tihiin in xulkeena biladaha baseball-ka ay yihiin kuwo tayo sare leh, oo gaar u ah inay abaalmarintaadu u ekaato sidii socod guri. Waxaan sidoo kale wadnaa xulasho wanaagsan oo ah Koobab Baseball iyo Dhalal.
Baseball wuu soo laabtay waxaanan kuu haynaa koobabka baseball-ka iyo bilado aad adigu ku xusayso epic (haddii dib loo dhigo) xilli ciyaareedka 2020. Kala dooro inta udhaxeysa saxanada gurigayaga iyo kan ugu caansan, koobka gacmo gashiga baseball. Waxaa lagu heli karaa cabirro aad u tiro badan, qaabab iyo midabbo kala duwan, waxaannu wax ugu haynaa qaab kasta iyo miisaaniyad kasta, iyo dabcan, xardho bilaash ah oo aan xad lahayn! Shakhsiyeela koobkaaga baseball-ka maanta oo ku badbaadi qiimaheena hooseeya iyo qiimo dhimistayada!
Hore: MEDALS WACYI GALIN
Xiga: Billadaha Kubadda Koleyga